Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela eFrance! - I-LucidPix
Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela eFrance!
Bonjour waseFrance! Ukwanelisa izifiso zakho zokuvakasha ngesikhathi sokuvalelwa wedwa, sikunikeza uhlu oluphelele lwezindawo ezinhle ongazihambela kuleli lizwe elihle laseYurophu. Gcina leli khasi kumabhukhimakhi wakho bese uligcina njengegqozi lokuthi ngabe kuphephile ukuhamba nini. Iyiphi indlela engcono yokubonisa izindawo ezingcono kakhulu zokuvakashela eFrance kune-3D usebenzisa iLucidPix.
Itholakala kwi-Riviera yaseFrance, leli dolobha likhangwa ngabantu abaningi, kubandakanya nabathile osaziwayo abaphezulu. Ukuqoqwa kwabo kwezindawo zokudlela namabhishi adumile anjengePampelonne, kubeke leli dolobhana lolwandle laseFrance ebalazweni. Le ndawo ifanelekile phakathi nezinyanga zasehlobo lapho ufuna ukuphumula embhedeni welanga kwamanye amakilabhu abo asendlini ebanzi kakhulu - ungazihlola lapha!
Inhloko-dolobha yaseFrance futhi okungenye yezindawo ezaziwa kakhulu zokuvakasha emhlabeni wonke, iParis yindawo enezindawo zokuvakashela eYurophu. Idolobha elidumile lihanjelwe kwizingosi eziningi zabavakashi abavela e-Le Tour Eiffel baye e-Les Champs Elysées, futhi uqinisekisiwe ukuthi awusoze wabhajwa. Bheka i-Plant Ware's Izindawo zokudlela ezihamba phambili zokubona ngokulingana eParis ngombono onemininingwane yokuthi ungavakashela kuphi.
Lo muzi waseFrance, owaziwa nangokuthi yiLa Ville Rose ngenxa yezitini zawo opinki nokwakhiwa kwawo, utholakala esifundeni esiseNingizimu yezwe. Idolobhakazi liphupha lonke lesitolo esinezitolo ezinkulu zomnyango njengeGaleries La Fayette kanye nemikhiqizo efana neZara, lapho uhamba ibanga elilodwa. Futhi, kungukugibela amahora amabili nesigamu kuphela ukusuka emngceleni weSpain!
Njengoba isendaweni eseningizimu nentshonalanga yeFrance, iBordeaux idonsela izinkulungwane zezivakashi unyaka ngamunye lapho zifuna ewayinini yazo edumile emhlabeni. Idolobha belilokhu likhiqiza iwayini kusukela ngekhulu lesi-8 futhi lithembela kumkhiqizo njengomthombo omkhulu wemali engenayo. Kubhalwe futhi njengolunye lwayo Izindawo Zamagugu Womhlaba ze-UNESCO "njengesibonelo esivelele semikhuba emisha yasendulo ne-neoclassical kanye [nemibukiso] ubumbano nokuhlangana okuhle kwamadolobha nokwakha izakhiwo."
Wake waya kulezi zindawo eFrance? Guqula izithombe zakho zokuhamba zibe yi-3D ngokusebenzisa iLucidPix futhi ungakhohlwa ukusithega ithuba lokufakwa Instagram wethu!
Ungakwazi Landa i-LucidPix ye-Android futhi Landa i-iPhone, uqiniseka ukuthi wabelane ngezithombe zakho kumakhasi we-Facebook weLucidPix ukuthola ithuba lokufakwa eqenjini! Ungaba nabo Izithombe ezinhle kakhulu ze-LucidPix 3D, Izithombe zeLucidPix ze-3D ku-Facebook, noma elinye ikhasi leqembu le-3D Facebook!
Amathiphu wokuthatha iDolobha Photography →← Izinto okufanele zenziwe eBay Area ngesikhathi seCovid-19